Xubno wasiiro iyo saraakiil dawladda isugu jira oo maantay gaaray Kismaayo. – Radio Daljir
Diseembar 27, 2012 10:48 b 0
Kismaayo, Dec, 27, 2012 – Magaalada Kismaayo waxaa maantay gaaray wafti uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya C/kariin Xuseen Guuleed, waxaana socdaalkiisa ku wehliyay xubno isugu jira wasiiro iyo saraakiil uu ka mid yahay talyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya General C/qaadir Shiikh Cali Diini.
Xubnahan oo saaka ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka magaalada Kismaayo Kusoo dhaweeyay maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo gacanta ku haya, iyo saraakiisha ciidamada Kenya ee kusugan magaalada Kismaayo.
Soo dhaweynta kadib ayaa waxaa wafdiga loo galbiyay gudaha magaalada iyagoo kulamo laqaadan Doona saraakiisha ciidamada dowlada iyo kuwa Kenya ee qeybta ka ha howlgalka AMISOM ee Soomaliya Iyagoo sidoo kalena lakulmi doona qeybaha bulshada magaaalada Kismaayo.
Wafdigan ayaa booqan doona goobo badan oo magaalada kismaayo katirsan sida Dekeda weyn ee Magaaladasi iyo xeryaha ay ciidamada qaranku kuijraan waxaana ay? u kuurgeli doonaan xaaladda guud Ee deeganka iyo sidii loo xoojinlahaa wadashqeynta iyo buslahad gobolada jubooyinka iyo dowladda.